I-Shell egqwesileyo kunye noMvelisi woBubushushu beTube kunye neFactory |GreenFir
Iqokobhe kunye netyhubhu yokutshintsha ubushushu isitya seketile uhlobo lokutshintsha ubushushu ketile uhlobo reboiler.
I-kettle reboiler ngumtshintshi wokushisa osetyenziswa kwinkqubo yokuchithwa kweekhemikhali.Lo mtshintshi wohlobo lweqokobhe unomphezulu omkhulu ovulekileyo wokubilisa ofana neketile esitovini sasekhitshini.Ngokuqhelekileyo, isitya esisezantsi kwikholamu ye-distillation.Inqanawa ifumana i-condensate kwi-tray yokwahlukana ngaphezu kwayo kwaye ibuyisela umphunga ukubonelela ngamandla obushushu kwikholomu.Uyilo lwe-kettle reboiler luvumela ukutshintshwa okukhulu kobushushu ngokuqhubekayo.
I-reboiler sisixhobo esifakwe kunye nekholamu ye-distillation kwaye injongo yaso kukuguqula ulwelo olubonelelwa yi-tray ephantsi yekholamu ye-distillation ibe ngumphunga.Lo mphunga ubuyiselwa kwikholamu yedistillation.I-reboiler ngokuyimfuneko ingumtshintshi wobushushu.I-kettle type reboiler yenye yezona ntlobo zixhaphakileyo ze-reboiler ezisetyenziswa kumashishini.
Iqukethe i-tube bundles, i-tube bundles ixhaswa ngamacwecwe axhasayo.Ubume betyhubhu bunokuba yimibhobho ethe tye okanye iityhubhu ezimilise u-U.Iityhubhu ezithe tye ziguquguquka ngakumbi zenza ukucoca kube lula.Iityhubhu ezibunjwe ngu-U zinenzuzo evumela ukwandiswa kwe-thermal ngaphandle kokubeka yonke into etshintshisayo emngciphekweni.
Uxinzelelo lomsebenzi, MPa.G
Uxinzelelo loyilo, MPa.G
IN/OUT ubushushu bokusebenza, °C
Ubushushu boyilo, °C
Ubushushu bentsimbi obuqhelekileyo, °C
Ioli yokudlulisa ubushushu
Izinto eziphathekayo zamacandelo oxinzelelo oluphambili
Isibonelelo somhlwa, mm
Iqokobhe/intloko ye-oint coefficient
Ubunzima be-insulation, mm
Indawo yokudlulisa ubushushu, m2
Ubomi benkonzo, iminyaka
Uvavanyo lwe-hydraulic, uvavanyo lokuvuza komoya, uvavanyo loxinzelelo
Ngaphambili: Umvelisi ochwephesha wegesi yendalo yokuphelelwa ngamanzi emzimbeni
Okulandelayo: UmGangatho oLungileyo waseTshayina woMvelisi woShishino we-API weValve ye-DN15-50 yentsimbi eyakhiweyo iBellows yeglowubhu enesitshixo esiSetyenziselwe ubushushu obuPhakathi/iZero-Leakage.
I-Plate yokuTshintsha ubushushu